Apple iTunes ကို Windows Store ကနေ Download ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီ
27 Apr 2018 . 8:55 AM
Apple iDevices တွေနဲ့ Windows ကွန်ပျူတာတွေကို ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် iTunes ဆိုတဲ့ Software တစ်ခုကို အသုံးပြုရတာကို သိကြမှာပါ။ အဆိုပါ iTunes Software ဟာ Apple iMac ဒါမှမဟုတ် MacBook မသုံးပေမယ့် iPhone ၊ iPad စတဲ့ iDevices ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာမဖြစ်မနေရှိထားသင့်တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Apple iTunes ကို ကိုယ့်ရဲ့ Windows ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Windows Store ကနေ အသုံးပြုလို့မရပဲ Apple Website ကနေပဲ iTunes Software ကို Download ရယူပြိးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို Install ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Software တစ်ခုကို Website မှာ လိုက်ရှာပြီး သီးသန့် Download မပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Microsoft ကနေ Windows 10 ကို ကြေငြာခဲ့ပြီး Software Applications အတော်များများကို Windows Store မှာပဲ စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုး ရှာဖွေ Install ပြုလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ အခုဆိုရင် Facebook ၊ Messenger ၊ Instagram နဲ့ အခြားသော Application အများအပြားလည်း Windows Store မှာ ရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Microsoft ကနေ Apple iDevices တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ iTunes Software ကိုပါ Windows Store ကနေ ရယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Microsoft က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မကုန်ခင်က အခုလိုမျိုး Windows Store ကနေ iTunes ကို ရယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုအချိန်မှာ Windows Store ပေါ် ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ အခု Windows Store ကနေ Download ရယူလိုက်တဲ့ iTunes က သီးခြား Install ပြုလုပ်ထားတဲ့ iTunes Software မှာ ပါဝင်တဲ့ Features တွေအကုန်လုံးပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iTunes ကို Update ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပုံမှန်လိုမျိုး iTunes Software ကနေ ဆောင်ရွက်တော့မှာမဟုတ်ပဲ Windows Store ကနေ တစ်ဆင့် Update လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပဲ Windows Store ပေါ်က Apple iTunes ကို စမ်းကြည့်ရအောင်လား?
Apple iDevices တှနေဲ့ Windows ကှနျပြူတာတှကေို ခြိတျဆကျပွီးအသုံးပွုမယျဆိုရငျ iTunes ဆိုတဲ့ Software တဈခုကို အသုံးပွုရတာကို သိကွမှာပါ။ အဆိုပါ iTunes Software ဟာ Apple iMac ဒါမှမဟုတျ MacBook မသုံးပမေယျ့ iPhone ၊ iPad စတဲ့ iDevices ကိုငျဆောငျထားတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကှနျပြူတာမှာမဖွဈမနရှေိထားသငျ့တဲ့ Software တဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Apple iTunes ကို ကိုယျ့ရဲ့ Windows ကှနျပြူတာမှာ အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျ Windows Store ကနေ အသုံးပွုလို့မရပဲ Apple Website ကနပေဲ iTunes Software ကို Download ရယူပွိးတော့ ကိုယျ့ဘာသာကို Install ပွုလုပျရတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Software တဈခုကို Website မှာ လိုကျရှာပွီး သီးသနျ့ Download မပွုလုပျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး။
အခုနောကျပိုငျးမှာ Microsoft ကနေ Windows 10 ကို ကွငွောခဲ့ပွီး Software Applications အတျောမြားမြားကို Windows Store မှာပဲ စမတျဖုနျးတှလေိုမြိုး ရှာဖှေ Install ပွုလုပျနိုငျအောငျ စီစဉျပေးခဲ့ပွီးတော့ အခုဆိုရငျ Facebook ၊ Messenger ၊ Instagram နဲ့ အခွားသော Application အမြားအပွားလညျး Windows Store မှာ ရောကျရှိနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Microsoft ကနေ Apple iDevices တှနေဲ့ ခြိတျဆကျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ iTunes Software ကိုပါ Windows Store ကနေ ရယူနိုငျပွီဖွဈတယျလို့ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ Microsoft က ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈမကုနျခငျက အခုလိုမြိုး Windows Store ကနေ iTunes ကို ရယူနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အခုအခြိနျမှာ Windows Store ပျေါ ရောကျရှိလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ သတငျးကောငျးတဈခုကတော့ အခု Windows Store ကနေ Download ရယူလိုကျတဲ့ iTunes က သီးခွား Install ပွုလုပျထားတဲ့ iTunes Software မှာ ပါဝငျတဲ့ Features တှအေကုနျလုံးပါဝငျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ iTunes ကို Update ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ပုံမှနျလိုမြိုး iTunes Software ကနေ ဆောငျရှကျတော့မှာမဟုတျပဲ Windows Store ကနေ တဈဆငျ့ Update လုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အခုပဲ Windows Store ပျေါက Apple iTunes ကို စမျးကွညျ့ရအောငျလား?